कोरोना संक्रमणमुक्त भएको कति दिनसम्म रहँदैन पुन: संक्रमणको जोखिम? – Health Post Nepal
कोरोना संक्रमणमुक्त भएको कति दिनसम्म रहँदैन पुन: संक्रमणको जोखिम?
२०७८ फागुन ११ गते ११:२६
काठमाडौं – जसरी केही समयअघि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनका केसहरू बढ्दै गएका थिए उक्त समयमा संक्रमितलाई थोरै अन्तरालमा फेरि कोभिडबाट संक्रमित हुने सम्भावना पनि बढेको थियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार प्रारम्भिक सङ्केतहरूले ओमिक्रोन पुन: सङ्क्रमण हुने जोखिम अन्य भेरियन्टहरूको तुलनामा धेरै उच्च रहेको बताएको थियो। तर, यसको विस्तृत अध्ययन हुन अझै बाँकी रहेको छ। विश्वभरि नै अहिले कोभिड संक्रमणमा तीव्र गिरावट आए पनि पछिल्लो समय फेरि संक्रमित हुने डरले मानिसलाई सताइरहेको छ।
कोभिडबाट फेरि सङ्क्रमित हुने जोखिम हुन्छ?
सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सन (सिडिसी) का अनुसार भाइरसबाट पुन: संक्रमित हुनु भनेको संक्रमणबाट निको भई पुनः संक्रमित हुनु हो। धेरै व्यक्तिहरू कोभिडबाट निको भइसकेपछि पुन: हुने संक्रमणबाट सुरक्षा पाउँछन्। यद्यपि, अमेरिकी स्वास्थ्य एजेन्सीले कोभिडपछि पुन: संक्रमण हुन सक्ने विश्वास गरेको छ। तर यसबारे थप अनुसन्धान आवश्यक छ।
कति समयमा पुन: हुनसक्छ संक्रमण?
धेरै अनुसन्धानकर्ताहरूले कोरोनाभाइरसको सुरुदेखि नै विभिन्न तथ्याङ्कहरूमा अध्ययन गरिरहेका छन्। सन् २०२१ को अक्टोबरमा गरिएको एक अध्ययनमा कोभिड–१९ बाट निको भएका व्यक्तिको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता करिब ३ महिनादेखि ५ वर्षसम्म रहने देखाएको थियो भने अर्को अध्ययनमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता करिब ८ महिनासम्म रहने पत्ता लागेको थियो। धेरै विज्ञहरूले हाल उक्त समय ४ देखि ८ सातामा सिमित भएको बताइरहेका छन्। तसर्थ यो समयपछि निको भइसकेकालाई पुन: संक्रमणको जोखिम हुनसक्छ।
तपाईंमा कति दिनसम्म रहन्छ प्राकृतिक प्रतिरक्षा क्षमता?
कोविड संक्रमणको सम्पर्कमा आएका र निको भएका व्यक्तिहरूमा भाइरसको विरुद्धमा एक निश्चित स्तरको प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास हुन्छ, जसको अर्थ पुन: संक्रमित हुने जोखिम अलिकति कम हुन्छ। यद्यपि, स्वास्थ्य विशेषज्ञ र चिकित्सकहरूले सबैलाई सावधानी अपनाउन सल्लाह दिइरहेका छन्। हामी सबैलाई थाहा छ, यो व्यक्तिपिच्छे फरक हुनसक्ने हुनाले अघिल्लो सङ्क्रमणबाट तपाईंको प्रतिरोधात्मक क्षमता कति समयसम्म बढेको छ भनी पत्ता लगाउन अलि गाह्रो छ।
विशेषज्ञहरु भन्छन् कि तपाईंको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता केही महिनादेखि एक वर्षसम्म रहन सक्छ। वास्तवमा यो प्रत्येक व्यक्तिको भाइरसप्रति इम्युनोलोजिक प्रणालीको प्रतिक्रियामा निर्भर गर्दछ। कोरोना भनेको चिसो जस्तै हो, जसमा तपाईंको प्राकृतिक रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बिस्तारै घट्दै जान्छ। यदि कुनै व्यक्तिको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता एक भेरियन्टले बढेको छ भने उसलाई अर्को भेरियन्टबाट पनि संक्रमण हुनसक्छ।